लन्डनको टावर | यात्रा समाचार
एक पर्यटक आकर्षणहरू बेलायतको राजधानीमा सबैभन्दा लोकप्रिय छ टावर लन्डन। जब पर्यटन संसारमा फर्कन्छ, यो टावर फेरि भेटघाटले भरिन्छ, तर यस बीचमा हामी यसको इतिहासको केही कुरा जान्न सक्दछौं।
टावर, यो सजिलै चिनिन्छ, को एक धेरै महत्वपूर्ण ऐतिहासिक महत्व छ। समय बित्दै जाँदा यसका फरक प्रकारका कार्यहरू भएका छन् र उनीहरूसँग लन्डनको जनसंख्याको विभिन्न भावनाहरू छन्। यसको इतिहास र यसले के खजानाहरू राख्छ जानौं।
2 टावर लन्डनको भ्रमण गर्नुहोस्
टावर टेम्स नदीको किनारमा अवस्थित छउत्तरको किनारमा बरो टावर हेमलेट्स द्वारा। उनको कथा १० 1066 सालको हो जब प्रसिद्ध विलियम विजेता स्थानीय जनसंख्या नियन्त्रण गर्न र शहरको बन्दरगाहमा पहुँचलाई अझ प्रभावकारी ढ .्गले नियन्त्रण गर्न साइटमा किल्लाहरू निर्माण गर्न सुरु भयो।
केन्द्रीय संरचना त्यसपछि को रूपमा चिनिन्थ्यो सेतो टावर र मा गुलाब 1078पुरानो रोमन पर्खाल भित्र र नर्मन्डीबाट ल्याइएको चुनढुंगाले बनेको हो। त्यसपछिका शताब्दीहरूमा यी रक्षा संरचना विस्तार गरिएको थियो पर्खाल र ह्वाइट टावर बाहिर यो एक प्रमुख बचाव केन्द्रित संरचना को मुटु भयो।
La भित्री भित्ता त्यतिबेला यसमा १ 13 टावरहरू थिए, सेतो टावरको वरपर। ती मध्ये एक धेरै लोकप्रिय थियो, खूनी टावर, जबकि वेकफिल्ड र बउच्याम्प पनि लोकप्रिय थियो। त्यसपछि त्यहाँ थियो बाहिरी भित्ता १ th औं शताब्दीको मध्यसम्म टेम्सले खनेको खाईले घेरिएको।
र खोरको बाहिर अर्को भित्ता पनि थियो जुन पछि तोपहरू र आधुनिक तोपखानेहरू थिए। सत्य यो हो सम्पूर्ण परिसरले सात हेक्टेयर कब्जा गर्यो शहरको दक्षिणपश्चिम कुनामा एउटा भित्ता मात्र प्रवेशद्वार थियो। त्यस समयमा नदी सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने मार्ग थियो त्यसैले पानी ढोका सबैभन्दा बढी यातायातको साथ एक थियो। यो ढोका बप्तिस्मा थियो गद्दारको ढोका किनकि कैदीहरू यस मार्ग भएर वाइट टावरमा रहेको कारागारमा पसे।
तेह्रौं शताब्दी देखि १ the औं शताब्दीको सुरुसम्म धरहरा राखिएको थियो रोयल मेनजेरीहुनु सत्रौं शताब्दी सम्म शाही निवास। धेरैलाई थाहा छ मध्य युगमा यो जेल र कार्यान्वयनको स्थल थियो राजनीतिक बन्दीहरूको। यद्यपि मृत्युदण्डको सजाय पाएका अधिकांश कैदीहरूलाई भनिन्थ्यो ग्रीन टावरमा किल्ला बाहिर वा टावर हिलमा र त्यहाँ होइन।
सबैभन्दा प्रसिद्ध कार्यान्वयन भएको छ १ Bo1536 मा एनी बोलेन, हेनरी आठौं को श्रीमती, जेन ग्रे र उनको पति वा सर साइमन बुर्ली, सल्लाहकार र रिकार्डो I को ट्यूटर, अन्य धेरै जसो। कसैको राम्रो भाग्य थियो र केवल कैदीहरू थिए, जस्तै एलिजाबेथ प्रथम वा सर वाल्टर रेलेग। अधिक आधुनिक समयमा, उदाहरणका लागि पहिलो विश्वयुद्धमा केही जासूसहरू मारिए।
'S ० को दशक सम्म क्राउन रत्न, तहखाने मा जहाँ गहना घर, तर पछि तिनीहरू माथिल्लो तलामा गए जहाँ उनीहरूलाई राम्रोसँग प्रशंसा गरिन्छ। त्यस दशकमा त्यहाँ पुनर्स्थापना कार्यहरू पनि थिए, विशेष गरी अधिक मध्यकालीन क्षेत्रहरूमा, जस्तै सेन्ट थॉमस टावरहरू। 1988 पछि पुरानो किल्ला छ विश्व सम्पदा युनेस्को द्वारा नामित
टावर लन्डनको भ्रमण गर्नुहोस्
आज टावरमा एक सैन्य चौकी छ, ग्रीन टावरमा १ XNUMX औं शताब्दीमा क्वीन्स हाउसमा निवासी गभर्नरसँग। यो गभर्नर प्रभारी हो गार्ड, the माहुरीपाल सुन्दर, जो अझै पनि एक लगाउँछन् ट्यूडर समय वर्दी र तिनीहरू धरहरा भित्र बस्छन्। ती ती हुन् जसले आगन्तुकहरूलाई मार्गनिर्देशन गर्छन्, एक वर्ष दुई र तीन लाख बीच।
यी व्यक्ति वा आधिकारिक टावर गार्डहरूको लागि सहि नाम हो योमन वार्डर y टावर ११ औं शताब्दीमा निर्माण भएदेखि यिनीहरू अस्तित्वमा छन्। वास्तवमा, यो विश्वको सब भन्दा पुरानो व्यापार हो। पहिलेको समयमा उनीहरूले बन्दीहरूलाई सहयोग गरे र आवश्यक परेमा उनीहरूलाई यातना दिए। आज तिनीहरूको कार्यहरू कम हिंसात्मक र इतिहासकार र गाइड बन्नुभएको छ पर्यटन, तर यो पद प्राप्त गर्न तिनीहरूले ब्रिटिश सेना वा नौसेना वा शाही वायु सेना मा कम्तिमा २२ वर्ष सेवा गरेको हुनुपर्छ र एक निश्चित ओहदामा पुग्नु पर्छ।
एक पटक चयन भएपछि, सबै रक्षकहरू टावर भित्र आफ्नो परिवारको साथ बस्छन्। के त्यहाँ महिला गार्डहरू छन्? हो, २०० since पछि। यदि तपाइँ कुनै दिन जानुभयो भने तपाइँले उनीहरूको चम्किलो निलो र रातो रंगको पोशाक देख्नुहुनेछ, तर यदि तपाइँ आधिकारिक महत्त्वको अवसरमा जानुहुन्छ भने तपाइँले उनीहरूलाई सुन र रातो ट्यूडर युनिफर्मको पोशाकमा देख्नुहुनेछ।
टाढाको लन्डनको इतिहासको साथ। जब यो भय terrible्कर महामारीलाई हटाइन्छ, लन्डन संसारभरका आगन्तुकहरूसँग हराएको जीवन पुनः प्राप्त गर्न पर्खिरहन्छ। त्यसो भए यो जान्नु राम्रो हो वर्षको समयको आधारमा टावरमा फरक समय हुन्छ। उदाहरण को लागी, प्रकाश बचत समय (अक्टुबर until१ सम्म) शनिबार बिहान 31 देखि साँझ9सम्म र आइतबार र सोमबार बिहान १० देखि :5::10० सम्म छ। तपाईंसँग साँझ5सम्म मात्र प्रवेश गर्ने समय छ।
भाग्यवश तपाईं टिकट अनलाइन किन्न सक्नुहुन्छ र भ्रमण निश्चित गर्नुहोस्। प्रति वयस्क टिकट मूल्य हो २..28 ० पाउन्ड, लगभगe33 यूरो। एउटा बच्चाले १..14० ​​पाउन्ड तिर्दछ। एक पटक भित्र, तिमी के देख्न सक्छौ? La सेतो टावर, जुन लन्डनको कुख्यात टावर हो, शहरको केन्द्रीय र पुरानो भवन; टावरका प्रख्यात बासिन्दाहरू, कागहरू, कि एक पौराणिक कथा अनुसार जब तिनीहरू त्यहाँ हुँदैनन् तब टावर ढल्छ र यसको साथ, स्पष्ट रूपमा, इ England्ल्याण्ड, र त्यसकारण त्यहाँ काभनहरूको मास्टर छ, जहिले पनि तिनीहरूको हेरचाह गर्दछ।
तपाईं पनि भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ मध्ययुगीन दरबार, इम्पोजिंग, जसमा केही एन्टिक फर्निचर छ जुन हामीलाई शताब्दीहरू पहिले कसरी जीवन बिताएको झलक देखाउन अनुमति दिन्छ वा कमसेकम कुलीन वर्ग कसरी बाँच्यो।
त्यहाँ पनि छ सान पेड्रो र भिन्कुलाको शाही चैपल, जुन १1520२० को मिति हो, र जसमा केही प्रसिद्ध बन्दीहरूको मृत्युदण्ड दिइएको छ र मारियो। चैपलले कम्प्लेक्समा बस्ने गार्डहरूको परिवारका लागि पनि कार्य गर्न जारी राख्दछ। र अन्तमा, क्राउन रत्न तीनीहरू पनि अवश्य अवश्य देखिने छन् किनकि तपाईंले तरवार, मुकुट वा राजदण्डहरू देख्नुहुनेछ जुन बहुमूल्य ढु stones्गाले भरिएको छ र इतिहासमा खडा छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » लन्डन » लन्डन को टावर
ला ग्रासिआसा टापु